Maydadka tahriibayaal ku geeriyooday xeebaha Ceelaayo oo la helay. – Radio Daljir
Maydadka tahriibayaal ku geeriyooday xeebaha Ceelaayo oo la helay.
Las Qoray,Feb 14 -Maamulka degmada Laasqoray ee gobolka Sanaag ayaa waxaa uu sheegay in xeebaha deegaanka Cadcado oo masaafo 70km u jirta degmada Laasqoray in laga helay meydadka 28qof oo ka mid ahaa dadkii ku geeriyooday dooni horaantii todobaadkan ku degtay xeebaha deegaanka Ceelaayo ee gobolka Bari.
Duqa degmada Laasqoray Yuusuf Jaamac Dibad oo waraysi gaar ah siiyay Radio Daljir ayaa waxaa uu sheegay dadwayanaha deegaanka Cadcado iyo maamulka degmada Laasqoray inay maydadka la helay inay aas ugu sameeyeen deegaankasi.
Waxaa uu sheegay inaysan haynin wax faahfaahin ah oo kusaabsan ehelada dadka la xabaalay,balse la’aqoonsaday maydadka sadex ka mid ah eheladooda.
Xeebaha deegaanka Ceelaayo ee gobolka Bari ayaa todobaadkii lasoo dhaafay waxaa ku dagtay dooni tahriib oo kusii jeeday dalka Yemen,waxaana shilkaasi ku nafwaayay 58 qof iyadoo ciidamada badda Puntland ay soo badbaadiyeen 13 qof oo rakaabka doonida la socday ka mid ahaa.